Tafiditra ao anatin’izany ny olana eo amin’ny taovam-pananahana sy ny nono fa eo ihany koa ny fitondrana vohoka. Na salama mandavan-taona aza nefa ny vehivavy iray, ary tsy manana olana ara-pahasalamana, dia tokony hanokana fotoana ihany, hanatonana “génecologue”.
Rehefa miditra eo amin’ny fiainam-pananahana
Raha tsy nisy tranga na olana hafahafa niseho nandritra ny fotoana naha-adolatsento dia rehefa miditra ao anatin’ny fiainam-pananahana sy ny firaisana ara-nofo no tokony hizaha dokotera “gynécologue” voalohany. Anton’izany ny hahafantarana ny zava-mitranga mandritra io firaisana ara-nofo io, ny tsingerim-bolana, ny mety ho antony tsy hampandeha ny fadimbolana na tsy bevohoka aza ary ny fanabeazana aizana mifandraika amin’ny toe-batana, raha tapa-kevitra ny hanao izany.
Tsara ihany koa raha mizaha fahasalamana isan-taona any amin’ny “gynécologue” ny vehivavy na salama aza. Tokony ho jerena mantsy ny fahasalaman’ny tranon-jaza, ny vozon’ny tranon-jaza, ny fivaviana, ny nono … . Tokony hanao fitiliana amin’ny alalan’ny “frottis vaginale” ihany koa, hanamarinana sao sanatria mitondra ilay viriosy mahatonga ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza antsoina hoe : “papillomavirus” ilay vehivavy.
Mialohan’ny hametraka zaza
Fihetsika tokony hataon’ny vehivavy rehetra, mialohan’ny hametrahana zaza, ny mizaha ny fahasalaman’ny tranon-jaza. Omanina mialoha mantsy io taova io mba hipetraka tsara ny zaza ka hahalavorary ny vohoka. Tohizana foana ny fizahana eny amin’ny “gynécologue” mandritra ny fitondrana vohoka iray manontolo.
Mialoha sy aorian’ny fitsaharam-pitsaihana
Mialohan’ny fidirana ao anatin’ny fitsaharam-pitsaihana sy aorian’ny fitsaharam-pitsaihana, izany hoe : any amin’ny faha-55 taona any, dia tokony hizaha fahasalamana ihany koa ny vehivavy. Amin’io fotoana io no hanaovana ny fitiliana isan-karazany, sao misy soritra homamiadana amin’ny nono, ny tranon-jaza, ny vozon’ny tanon-jaza, ny atodin’aina sns.